DHEGEYSO-Shaqaalaha dowladda Puntland oo loo fasaxay xuska dhalashada NNKH. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Shaqaalaha dowladda Puntland oo loo fasaxay xuska dhalashada NNKH.
Diseembar 11, 2016 3:36 b 0
Garoowe, Dec 11 2016-Dowladda Puntland ayaa si rasmi ah magaalada Garoowe maanta ugaga dhawaaqday inay fasaxday shaqaaleheeda maalinika berry ah ee taariikhdu ku began tahay 12-ka bisha 12aad ee 2016.
Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland ayaa sheegtay in shaqaalaha dowladda lafasaxay maalinka burrito ah munaasabadda dhalashada NNKH awgeed.
Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle, sheegay in shaqaalaha dowladdu ay shaqada kusoo laaban doonaan 13-ka 12aad.
Wasiirka Wasaarada Shaqada iyo shaqaalaha ee Dowlada Puntland C/raxmaan sheeq Axmed ayaa Maalman Safaro shaqo kujoogay Gobolka Bari. Waxaana uu ku Halanaa sidii dhalinyarada Puntland loogu abuuri lahaa Xirfado shaqo.
Golaha xukuumadda Puntland oo yeeshay kulan aan caadi ahayn.
DHEGEYSO-Xoolo dhaqato horleh oo ku cayroobey gobolka Nugaal.